HESHIIS DHAN: Waqtiga Ay Real Madrid Heshiiska La Gelayso Kylian Mbappe Oo La Shaaciyey | Laacibnet.net
HomeSuuqa Kala IibsigaHESHIIS DHAN: Waqtiga Ay Real Madrid Heshiiska La Gelayso Kylian Mbappe Oo La Shaaciyey
HESHIIS DHAN: Waqtiga Ay Real Madrid Heshiiska La Gelayso Kylian Mbappe Oo La Shaaciyey
Real Madrid ayaa ugu dambayntii gacanta sare yeelanaysa, waxaanay u dhow dahay in ay la saxeexato weeraryahanka reer France ee Kylian Mbappe, kaas oo ay hadda soo baxayso faahfaahin heshiiska ay kula soo wareegayso.
Mbappe ayaa xalay guul weyn gaadhsiiyey PSG isaga oo laba gool u dhaliyey ciyaartii ay 3-2 ku garaaceen Bayern Munich oo garoonkeeda joogtay, waxaana uu goolashan kusii darsaday saddexlaydii uu hore ugu bahdilay Barcelona wareeggii 16ka.
22 jirkan ayaa la sheegayaa in ay xilli ciyaareedkani noqon karo midkiisii ugu dambeeyey ee PSG, isla markaana uu xagaaga ka tegi doono iyadoo kooxdiisuna ay ku qasbanaan doonto in ay iibiso.
Marka la gaadho bisha June, heshiiska uu Mbappe kula jiro PSG ayay kaliya ka hadhsanaan doonaan 12 bilood, waxaanay kooxda reer France ku qasban tahay in ay iibiso xagaaga si aanu bilaash ugaga tegin sannad kaddib.
Si kastaba, Wariyaha reer Spain ee Josep Pedrerol ayaa shaaciyey in Mbappe uu iman doono Madrid sida ugu dhakhsaha badan, waxaanu yidhi: “Hore ayaan u sheegay in hadafka Real Madrid uu yahay in ay lasoo saxeexato Erling Haalnad iyo Mbappe, waxaana labadoodaba soo raacaya David Alaba.”
Josep Pedrerol oo ka hadlayay barnaamij ka baxa telefishanka El Chiringuito ayaa intaa ku daray: “Aalaba ayaa ah kan ugu fudud ee ay lasoo saxeexanayaan, waanaynu arki doonaa Haaland haddii Dortmund ay ogolaanayso in ay iibiso xagaagan.
“Laakiin, waxaan ogahay in Real Madrid ay aad ugu kalsoon tahay in ay lasoo saxeexan doonto Mbappe marka loo eego Haaland.
“Waxay ila tahay in Mbappe uu waqtigan u fudud yahay in Madrid ay la saxeexato marka loo eego Haaland.”
Ugu dambayntii waxa uu wariyahani sheegay in Mbappe uu xilli ciyaareedka dambe imanayo Madrid, waxaanu yidhi: “Waxay ila tahay in Mbappe uu xilli ciyaareedka dambe u ciyaari doono Real Madrid, waanaynu arki doonaa waxa uu heshiiskani dhaqaale ahaan u baahan yahay.”
Real Madrid ayaa Mbappe dartii u sadqayn doonta laacibka reer Brazil ee Vinicius Junior, sida uu rumaysan yahay Josep Pedrerol, waxaanu yidhi: “Waxaan ku darayaa in Vinicius uu wali yahay bartilmaameedka Leonardo. Waynu arki doonaa waxay Real Madrid samayso iyo waxa uu Vinicius ku fikirayo.”